पहिलो चरण चुनावमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान: कहाँ कति खस्यो ? – Etajakhabar
पहिलो चरण चुनावमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान: कहाँ कति खस्यो ?
संघ तथा प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि आइतबार सम्पन्न पहिलो चरण चुनावमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको छ । यो स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा केही कम प्रतिशत हो । निर्वाचन आयोगले सबै स्थानको विवरण संकलनपछि केही प्रतिशत बढ्न सक्ने जनाएको छ ।
यसअघि तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा ७३ प्रतिशत मत खसेको थियो । २०७० को दोस्रो संविधानसभामा ७० प्रतिशत, ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ६१ दशमलव सात प्रतिशत, ०५६ सालको निर्वाचनमा ६५ दशमलव आठ र ०५१ को निर्वाचनमा ६१ दशमलव आठ र ०४८ सालको निर्वाचनमा ६५ दशमलव १४ प्रतिशत मत खसेको थियो ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ११, २०७४ समय: ७:१८:५१